Akwụkwọ Toni Hill
3 akwụkwọ kacha mma Toni Hill
Psychology na -edepụta ọtụtụ ihe ịga nke ọma na ụdị ojii. Ma onye edemede Toni Hill ahapụlarị ọzụzụ agụmakwụkwọ na nke a. Anyị nwere ike na -abịaru onye ogbu mmadụ ahụ, onye nwere ike bụrụ onye ihe metụtara ma ọ bụ onye nyocha, ajụjụ a bụ ka ọ daba na ọkpụkpọ egwu, nke enweghị ahụ iru ala, nke ...
Ọchịchịrị gbara ọchịchịrị nke Teresa Lanza, nke Toni Hill dere
Ọchịchịrị kacha atụghị anya ya dị ka arụmụka ederede na -eme n'ezie, n'ihu imi anyị. Ọ bụ ebe ahụ ka Toni Hill nwetara akwụkwọ akụkọ a nke juputara n'egwu na egwu egwu dị egwu nke na -esonye na -emegiderịta anyị miri emi n'etiti ịdị mma na ịdị ntakịrị nke mkpụrụ obi. ...
Tigers Glass, nke Toni Hill dere
Igbu mmadụ dịka oke ikpe ọmụma na ịkwa ụta. Echiche nke ihe ọjọọ ewepụtara n'ụzọ onye ọ bụla nwere ike inwe ọmịiko na ya nke ukwuu. Enwere ihe ụfọdụ n'oge gara aga nke nwere ike kpughere anyị n'echiche nke nnukwu ihe egwu ma ọ bụ ihe adịghị mma. NA…